गुगल एलिभेसन डाटा को सत्यता परीक्षण गर्दै - आश्चर्य! - Geofumadas
घर/गुगल अर्थ / नक्सा/गुगल एलिभेसन डाटा को सत्यता परीक्षण गर्दै - आश्चर्य!
गुगल अर्थले तपाईको उचाई डेटामा निःशुल्क Google ऊंचाई एपीआईको साथ पहुँच प्रदान गर्दछ। सिभिल साइट डिजाईनले यसको क्षमतालाई यसको नयाँ उपग्रहले भूतल कार्यक्षमतासँग लाभ उठाउँछ। यो प्रकार्यले तपाईंलाई क्षेत्र चयन गर्न र ग्रिड बिन्दुहरू बीच दूरी चयन गर्न दिन्छ, यसले सिभिल साइट डिजाईन सफ्टवेयर र एयुअल छविसँग एकीकृत स्तरको घटाउँछ।
लेन्स मिडलोको ChasmTch LLC ले यो मामला बनायो को उपयोग मा प्रकाशित भएको थियो ट्विनगोई पत्रिका
म Google द्वारा उपलब्ध डेटा को सटीकता को बारे मा संधै म उत्सुक थियो। त्यहाँ दुई सम्भावना प्रयोग गरिएका घटनाहरू थिए जुन मैले मनमा राखे:
नयाँ उप-विभाजनका लागि अवधारणात्मक / प्रारम्भिक डिजाइन।
HEC-RAS2सँग बाढीकालमा विश्लेषणको लागि बेसिनको टोपोग्राफीमा पहुँच गर्नुहोस्
मूल्यांकन उद्देश्यका लागि, मैले दुई साइटहरू चयन गरे:
डनडेन, फ्लोरिडामा 1 साइट एक धेरै उच्च उप-विभाजन थियो। यसका लागि, मैले मूलतया NOAA वेबसाइटबाट2लाख लिडार बिन्दुहरू डाउनलोड गर्न र प्रशोधन गरेका थिए।
2 साइट फ्लोरिडा, लेक काउन्टीमा एक प्रस्तावित व्यावसायिक उपन्यास थियो, जहाँ हामीले 100 ग्रिडमा सर्वेक्षण डेटा र साथसाथै अवस्थित पूर्वाधारको विस्तृत सर्वेक्षण गरेका थियौ।
प्रकार्य उपग्रह सतह सम्म, 10 मिनेट प्रत्येक भन्दा कम मा दुई परीक्षण क्षेत्रहरूको लागि उत्पन्न सतहहरू। गुगलको उचाई डाटाबाट उत्पन्न गरिएका सतहहरू आश्चर्यजनक रूपमा लियोडार र सर्वेक्षण डेटा तुलना गर्दा आश्चर्यजनक थियो।
यद्यपि, यो धेरै उपयोगी हुनेछ यदि Google ले तपाईको उचाई डेटा को स्रोत र मिति प्रदान गर्यो।
परिणामहरू धेरै समान छन्, तथापि, मूल लिडर अंकहरू ज्ञात पोखरीको स्तरको तुलनामा 8.5 कम खुट्टा थिए। यो समायोजन सिभिल साइट डिजाईनको लिडार डेटामा राखिएको आकृति भन्दा पहिले थप गरियो, जस्तै कि दुई स्रोतहरु बीच सतह डेटा को विस्तृत तुलना मा तल देखाइयो। 1 / 2, 1 /3र2/3को औसत उचाइ व्यावहारिक समान हो। लिखित औसत उचाइ3फिट लिड डेटा को भन्दा माथि छ। यो फरक तथ्य तथ्यलाई दिइएको छ कि पेडहरू समावेश गरिएका क्षेत्रहरूको तुलनामा खुला क्षेत्रहरूमा अंकहरू खनी हुन्छन्। उपग्रह डेटा एक 20 'ग्रिडमा उत्पन्न गरिएको थियो।
अर्को, उपग्रह डाटाको एक दृश्य निरीक्षण प्रस्तुत गरिएको छ कि इलाकाको वास्तविक अवस्थासँग तुलनात्मक रूपमा तुलना गर्दछ।
यस विशेष मामला मा, कच्चे शुद्धता र वर्तमान सडकहरु र घरहरु को स्थान को स्थिति संग सम्बन्धित सामान्य आकार को रूप मा Google को ऊंचाई मा एक नोड को राखन को लागी थियो।
वाणिज्यिक क्षेत्र को उपज
व्यावसायिक उपनिवेशको निम्न उदाहरणमा, आकृति उपग्रह डाटाको साथ 20 ग्रिडबाट उत्पन्न गरिएको थियो, रातो कर्साइज 100 'ग्रिडमा मान्यता डेटाबाट प्राप्त गरियो।
स्थानीय ज्ञान हो, तथापि, उचाइ डेटाको रूपमा पहिचान गरिएको मितिको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। अवसाद पूर्ण भयो र गुगल उचाई डेटा एकत्र गरेपछि रिजर्भेसन सिर्जना गरियो। त्यसैगरी, सबै उचाई डेटा संकलन गरेपछि साइटको उत्तरपूर्वी भागमा एक होल्डिंग तालाब बनाईएको थियो।
Google को उचाई डेटा को स्रोत, तपाईंको स्थान अनुसार भिन्न हुन्छ। यद्यपि Google को उचाई डेटा बारे थप जानकारी केहि स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो रहस्य रहन्छ।
यद्यपि यो विश्लेषण वैज्ञानिक छैन, यसले संकेत गर्दछ कि गुगल उचाइ डेटा स्वीकार्य छ र शहरीकरणको अवधारणात्मक डिजाइनको लागि विचार गर्न सकिन्छ वा बेसिन सतह उत्पन्न गर्न सकिन्छ जुन एचईसी आरएएस जस्ता अनुप्रयोगहरू संग बाढी विश्लेषणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। 2।
RAUL ARROYO HERMOSO भन्छिन्:
विभिन्न स्रोतहरु द्वारा प्राप्त अल्टिमित डाटा को राम्रो / परिशुद्धता तुलना गर्न यो जटिल छ।
समस्या गणना प्रक्रिया / पद्धतिमा हो जसद्वारा DEM वा lidar डाटा जुन तुलना गरिएको छ उनीहरूलाई प्राप्त गरिएको छ -> जाल चरण, Geoid मोडेल विचार गरीएको छ, नियन्त्रण बिन्दुहरू आदि।
IGN Lidar z orthometric, RTK GPS सर्वेक्षण उच्च सटीक लेवलिंग र गुगल अर्थ द्वारा समर्थित -> मेरो ब्लगमा म के बाहिर आउँछ भन्नेछु भनेर तुलना गर्न स्पेनमा अध्ययन गर्ने छु।http://autodidactaengeomatica.blogspot.com/
बधाई छ र तपाइँको योगदान को लागी धन्यवाद ...